Factorylọ ọrụ nri "Chernyansky" na-emepụta tọn 15 nke French fries kwa ụbọchị - magazin "Potato System"
Lọ ọrụ nri "Chernyansky" na-emepụta tọn 15 nke French fries kwa ụbọchị
Osisi nri "Chernyansky" (mpaghara Belgorod) na-emepụta ngwaahịa ya kemgbe afọ iri na otu. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji poteto ndị a na-ebubata eji emepụta ihe, ma nke a anaghị emetụta budata na olu ọrụ.
Mmepụta nke fries French bụ igwe ọrụ na kọmputa. Agbanyeghị, ndị otu ahụ karịrị ndị ọrụ injinịa 70 na ndị ọrụ teknụzụ yana ndị ọrụ aka ọrụ ọkachamara. Chief Technologist Natalya Latysheva mere njem nke osisi.
Usoro mmepụta nwere ọtụtụ nkebi. Nke mbụ, a na-asa tubers ahụ, mgbe ha gbusịrị. Mgbe ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ọrụ aka na ọrụ teknụzụ a rụrụ - agbakwunye ma ọ bụ nchịkwa nhicha nke tubers. A na-eme ya site na ndị nyocha akara: ọ bụrụ na tuber nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe mebiri emebi ma ọ bụ ntụpọ ndị ọzọ, a jụrụ ya. Site na tebụl nyocha, poteto na-abanye na usoro ịcha mmiri. A na-ahazi poteto iberibe site na nha na ogo, nke a na-eji ngwaọrụ pụrụ iche eme ihe site na iji foto.
Mgbe nke ahụ gasị, a na-eme ka poteto ahụ sie mmiri ọkụ. Na ntupu, na-agbagharị oge niile, a tọhapụrụ ya na sugars na stachi. Na ventilashị ventilated na okpomọkụ nke 60-100 Celsius C, oke mmiri niile na-ekpochapụ site na nduku ahịhịa, na ngwaahịa a na-ezigara na fryer miri emi. Akpaaka na-enye gị ohere ijikwa ma debe ọnọdụ ọkụ mmanụ setịpụrụ. E ghere poteto ahụ ruo minit abụọ na ise na okpomọkụ nke 160 Celsius C na 190 Celsius C, dabere na ụdị na ọkpụrụkpụ nke ịkpụ. Mmepụta bụ ọlaedo ọkara-okokụre ngwaahịa na a crispy toasted jikọrọ ọnụ.
“Processinglọ ọrụ anyị na-emepụta ihe oriri na-emepụta ihe ruru tọn 15 nke fries French ndị na-atọ ụtọ, nke dị oke mkpa ọ bụghị maka gourmets dị ka ndị nkịtị, kwa ụbọchị. A na-ewere ngwaahịa niile ngwa ngwa gaa ngwa ahịa na ụlọ ahịa, ”ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ Gennady Klyuchevsky kwuru.
Tags: Mpaghara Belgorodfrench fys
Presorting: onye chọrọ mbido ụdị ngwaahịa na ihe kpatara ya
Chuvashia ga-akwado ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ nhazi nke ngwaahịa ugbo
Ndị ọrụ ugbo Russia enweghị ngwa owuwe ihe ubi biiti